Elu Speed ​​Ntu Ime Machine emebere n’ụzọ pụrụ iche maka mbọ dị iche iche. Anyị na-enye ụdị akụrụngwa dị iche iche, nke dị mfe iji rụọ ọrụ, nchekwa iji ya, ma nwee ntụkwasị obi iji na-agba ọsọ. Anyị na-enyekwa ụdị akụkụ dị iche iche na enyemaka pụrụ iche.
The ogologo waya ịbịaru igwe a na-eji adọta obere carbon, carbon dị elu, na wires igwe anaghị agba nchara. N'elu ihe ndị ahịa rịọrọ, enwere ike ịhazi ya maka dayameta na ntanetị dị iche iche nke wires.
Ngwa SPARE & IWU
Na-arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a ma ama n'ụwa niile, na-ekwe nkwa nnyefe oge mbụ.
C / Z Purlin Roll akpụ Machine nakweere gearbox mbanye; arụ ọrụ igwe ahụ ka kwụsie ike; ọ nakweere post-akpụ nākpacha aji aji iji hụ na ngwaahịa si mma ma zere n'ọdụ ụgbọ mmiri deformation.
Nche Rail Roll akpụ Machine
1. Mfe Ọdịdị na linear ụdị, mfe echichi, na mmezi.
2. N'ịnabata elu ụwa ama ika mmiri na pneumatic akụkụ, electric akụkụ, na ime ihe akụkụ.
3. Na-agba ọsọ na nnukwu akpaaka na ọgụgụ isi, enweghị mmetọ
4. Enweghị mkpa maka ntọala, ịrụ ọrụ dị mfe
Mba ： Nkọwapụta ihe
1.Onye kwesiri ekwesi ： Ejiri agba aja aja, ígwè galvanized
2.Obosara nke akụrụngwa ： 1250mm
3. Ọrịa ： 0.7mm-1.2mm
n'ichepụta ngwá, elu mmepụta technology, anụ ngwaahịa mma.
High-Speed ​​Barbed waya igwe a na-eji na-emepụta barbed waya ọtụtụ-eji maka nchekwa nchebe ọrụ, mba na-agbachitere, anụmanụ ya, ama egwuregwu ngere, ugbo, awara awara awara, wdg